Ra’iisul Wasaaraha DFKM Dr Cabdiweli Gaas oo maanta booqday Maxjaro ku yaala Bosaaso iyo Jaamacadda Bariga Afrika(Masawiro)
Bosaaso, Khamiis, December 29, 2011——Ra’iisul Wasaaraha DFKM Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefdigii ballaarnaa ee uu hogaaminayay muddooyinkii ugu dam beeyeyna booqasho ku marayay qeybo ka tirsan degaanada Puntland ayaa waxaa maanta uu kormeeray Jaamacada Bariga Afrika ee magaalada Bosaaso iyo weliba Maxjaro ku yaala duleedka magaalada.
Ra’iisul Wasaaraha oo ay wehlinayaan labadiisa kuxigeen, xildhibaano iyo madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiraxmaan Faroole ayaa kormeerkoodan ka bilaabay Maxjaro waaweyn oo ku yaala duleedka magaalada Boosaso halkaasoo laga dhoofiyo xoolaha nool kuwaasoo isugu jira Geel, Lo’, iyo Ari iyadoo ganacsigani uu yahay halbowlaha dhaqaalaha dalka Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha iyo wefdigiisu waxa ay u sii gudbeen Jaamacadda Bariga Afrika oo ah jaamacadii ugu horeysay ee laga hir geliyo degaanada Puntland isla markaaana ah Jaamacadda ugu ballaaran degaanadan, wuxuuna halkaasi kula kulmay maamulka iyo qaar ka mid ah ardayda Jaamacadda oo isugu jiray rag iyo dumar.
Ra’iisul Wasaare Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa ku ammaanay aas aasayaashii Jaamacadda Bariga Afrika inay ahaayeen hal yeeyo taariikhdu xusi doonto wuxuuna tulmaan u soo qaatay Alle ha u naxariistee Dr. Axmed Xaaji C/raxmaan oo ay kooxo aan la garaneyn ku dileen magaalada Bosaaso, wuxuuna ka codsaday maamulka inay u sameeyaan goob lagu xusuusto ama qeyb ka mid ah Jaamacadda inay ugu magac daraan si jiilka dambe ay u xusuustaan.
“Aniga waxbarashadu muhiimad gaar ah ayay ii leedahay mar kastana waxaan ku dadaalaa sidii loo horumarin lahaa wax barashada dalka, waxaana maanta hortiina ka balan qaadayaa in shaqsiyan aniga iyo xaaskeyga Hodan aan bixin doono sanad kasta kharashka 5 arday” ayuu yiri R/wasaaraha oo u balan qaaday sidoo kale maamulka inuu ka taageeri doono wixii xiriirka caalamiga ah si loo fududeeyo wadashaqeynta iyo ictiraafka Jaamacaddaha caalamka iyo Jaamacadda Bariga Afrika.
Garad Salad Hersi Boosaaso